Waxyaabaha lagaa rabo inaad ka ogaato shaqada ka socota Dubai Theresa R. Fianko
Ku dar Meheraddaada Dubai
Waxyaabaha ay tahay inaad ogaatid inaad ka shaqeyneyso Dubai
Isku Diyaarinta Mashruuca Dhisida Meel Dhalinta ee Dubai?
Maxay Sababtoo Doonaysaa Dubai Sida Loo Isticmaalo Booqashooyinka Koonfur Bari Jira
Published by Shirkadda Dubai City at June 7, 2019
Kordhinta CV ee kaliya $ 5 - Waad shaqo ka heli kartaa UAE, Qatar ama Saudi Arabia
Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ka shaqeynta Dubai
Dubai waa magaalo qurxoon iyo caqli badan caanna ah sababo badan oo wanaagsan sida ahaanshaha a ganacsi, xarunta ganacsiga iyo dalxiiska. Iyada oo qiyaastii 85% ee 3 milyan ee lagu qiyaaso inay tahay mid qurbaha ah, magaalada casriga ah waxay aragtay dad ka socda dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha oo u guuraya halkan oo ka shaqeeya. Sababo badan ayaa jira oo ka dhigaya Dubai inaysan kaliya soo dhoweyn dalxiisayaasha laakiin ay nabad u tahay deggeneyaasha.
Hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo nidaamyada waxaa nidaamiya sharciyo ka shaqeeya Dubai, marka qeybta aad doonto ee aad iskaa u ogaato waa inaad ogaataa oo aad fahamtaa xuquuqahaaga ka hor intaadan aqbalin shaqo soo bandhig. Kooxaha shaqaalaha halkan kama jiraan caan, si kastaba ha noqotee, the UAE Shuruucda shaqadu waxay daryeelaan dhinackasta oo ka mid ah shaqada si ay u hubiyaan inay uga shaqeeyaan jawi cadaalad ah, amaan ah oo caafimaad qaba.
Nidaamka siyaasadeed wuxuu ku salaysan yahay Dastuurka UAE
Instagram Credit: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
Waxaa jira marwalba hay'adaha dawlada iyo qeybaha gaarka loo leeyahay oo hubiya in arrimaha shaqadu ay si wax ku ool ah oo wax ku ool ah uga shaqeeyaan loo shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha. Waa mas'uuliyada labada dhinacba si loo hubiyo in hababka saxda ah la raaco marka loo eego dukumeentiyada iyo faa'iidooyinka. Marka arrintan la dhammeeyo, sharcigu wuxuu dhigayaa qaddiyadaha dhibka leh ee kiisaska dhacdooyinka dhaca xilliga ama ka dib shaqo. Bogga internetka www.uaelaborlaw.com, waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka iyo dhiirigelinta, saacadaha shaqada, isbeddelka iyo fasaxyada iyo xuquuqda shaqo-bixiyayaasha iyo shaqaalaha.
Markaad ku cusub tahay Dubai ama aad shaqo bedesho, hubi inaad akhrido oo aad ogaatid sharciyada shaqada. Fahmaan sharciyadan oo ka mid noqosho geeddi-socodka fulinta iyaga ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib markaad shaqadaada la leedahay ururkaaga aad dooratay. Haddii aad jeclaan lahayd faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qodobbada aan laguu garan karin, la xiriir mid ka mid ah xarumaha shaqada iyo waxaa jiri doona wakiil oo la heli karo si uu kuu caawiyo.
Nidaamka Canshuur celinta
Dubai waxay bixisaa dakhliga aan canshuurta lahayn ee qof kasta oo ka shaqeeya mushahar shaqsiyeed. Tani waa mid ka mid ah sababaha soo jiidashada dalal ka yimid dhamaan wadamada aduunka oo dhan. Dadku waxay ka tagaan dalalkooda inay shaqeeyaan si ay u helaan nolol tayo fiican leh naftooda iyo qoysaskooda. Fikradda ah inaanan haysan inaad bixiso canshuur Dakhligii ka soo gala waa dakhli soo dhawayn leh oo loogu talagalay qof kasta oo ka shaqeeya Dubai. Hab-nololeedku waa doorasho, markaa waxaad go'aansan kartaa sida aad doonayso inaad ku noolaato iyada oo ku saleysan dakhligaaga. Si kastaba ha noqotee, waad ogtahay in wax kasta oo aad kasbatay ay kugu soo gasho adiga oo aan haysan wax canshuur ah lagaa jaray. Dadka doonaya in ay badbaadiyaan, ka shaqeynta Dubai waxay awoodi doonaan fursadda.
Haddii ay jiri lahayd wicitaan codsi ah oo loogu talagalay dhalashada waddan kasta oo ku yaala Dubai, waxaad ka heli doontaa wakiil mid waliba! Tani waa sida kala duwanaanta shaqaalaha kala duwan ee Dubai iyo UAE guud ahaan. Dadka raadinaya waaya-aragnimo shaqo oo kala duwan, waxaad doortay magaalada saxda ah. Ma aha wax aad u badan in la helo ururo shaqaale oo ka kooban dadka ka soo jeeda qowmiyad gaar ah, taas oo macquul ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaa ugu badan inaad ka qaybqaadato inaad la wadaagto bey'adaada shaqooyinka aad la leedahay asxaabtaada ka kala yimid qaaradaha iyo wadamada kala duwan. Quruxda tani waa xaqiiqda ah in ay awoodaan inay wada shaqeeyaan sidii koox si isku mid ah loogu gaadho ujeedooyinka ganacsiga iyo ujeedooyinka ururka. Waxaad baran doontaa dhaqamada kala duwan, dabeecadaha, habdhaqanka, luqadaha iyo habka guud ee lagu noolaado dad kala duwan oo ka kala socda wadamo kala duwan. Ururada intooda badani waxay abaabulaan dhacdooyin dhaqameed oo xubnaha kooxuhu helaan fursado ay isku xiraan oo ay soo bandhigaan dhaqamada hodanka ah ee ka socda dalalkooda.
Heerka dembiga ee Dubai
Dubai waa mid ka mid ah magaalooyinka badbaadsan si ay ugu noolaadaan, iyadoo heerka dembigu uu hooseeyo. Adeegyada ammaanka ee halkan waa kuwo aad waxtar u leh in dadka deggan iyo dalxiisayaasha ay u hoggaansamaan sharciga. Xaqiiq ahaan, dadku waa inay ogyihiin amnigooda iyada oo aan ku xirnayn halka ay ku sugan yihiin caalamka, laakiin waa muhiim in la ogaado inaad ku nooshahay magaalo halkaas oo arrimaha amniga la siinayo ay tahay dareen iyo dadaalo mar walba loo sameeyo si loo hagaajiyo ammaanka.
Dubai waxaa ka jira shaqooyin dhowr ah oo ubaahan in la daaho ama shaqada la weeydiyo, iyo ogaashada in magaalo tahay amaan meel wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhaqaaqdo meheraddaada caadiga ah adigoon wax badan ka walwalayn. Ahaanshaha magaalo nabdoon waxay kaloo la macno tahay in la kordhiyo kalsoonida lagu qabo korinta qoysaska halkan. Waxa jira dhowr tas-hiilaad iyo kaabayaal oo Dubai ka dhigaya meel aad ku noolaan karto, ka shaqeyn karto oo aad la joogto qoyskaaga. Marka, haddii aad ka fiirsaneyso inaad la degto qoyskaaga Dubai ma jirto sabab badan oo aadan sidaa u sameynin.
Dubai waa xudunta ganacsiga iyo ganacsiga ugu weyn gobolka bariga dhexe, sidaa darteed shirkadaha badan oo ka shaqeeya isgaarsiinta caalamiga waxay badankood xarun ku leeyihiin ama ku leeyihiin magaalada. Carabi iyo Ingriis ayaa halkan looga wada hadlayaa. Shaqeynta iyo ku nool magaalada Dubai waxay ku siin doontaa cagta iyo muuqaal aad ubaahantahay oo aad ugu baahan tahay inaad ku tartanto goobta shaqo ee aduunka. Ka shaqeynta Dubai waxay kugu qalabeyneysaa xirfad iyo anshax loo baahan yahay to Diyaarso xirfaddaada heer-kaste. Dadka intooda badani waxay Dubai u adeegsan jireen dhagax ku tallaabsan si ay u soo galaan dalal kale oo ay doortaan, maaddaama hababku ay u fududaanayaan dadka deggan ama ku shaqeynaya halkan. Iyadoo la soo bandhigo caalamka, way fududahay in laga shaqeeyo meel kasta oo adduunka ah.
Waa dhul fursado aan dhammaad lahayn laga helo, Dubai ayaa weli ah meel lagu dhiso shaqooyinka riyada. Waxa jira fursado shaqo oo badan oo leh mashaariicda socda, socdaalka, hoteelada, teknolojiyadda iyo waxyaabo kaloo badan. Iyada oo Expo2020 kaliya geeska, xitaa in ka sii badan, fursado aad ugu faani karto inaad ku soo jiidato shaqadaada riyada Dubai. UAE guud ahaan waa dal aad u dulqaad leh oo dhiirigeliya kala duwanaanshaha halkan waxaad ka heli kartaa dadka diimaha oo dhan halkan, oo leh meel cibaadada ah.
Kuwa xiiseynaya ganacsi abuurista, lagagama tagaayo. Samaynta ganacsiga Dubai waxaa si sahlan loo sameeyay iyada oo loo marayo dadaallo kala duwan oo ay dowladdu ku dhiirrigelineyso in ay dhiirrigeliso ka-qeybgalka ganacsatada gaarka ah iyo kuwa dowladeed ee howlaha ganacsi. Tani waxay caddaynaysaa tirada maal-gashadayaasha ka hawl gala Dubai iyo sidoo kale ganacsiyada maxalliga ah iyo kuwa guryaha ka baxa ee soo baxa oo ubaxa. Kaabayaashu waa kuwo heer sare ah, isla markaana xarun u ah duulista hawada, Magaalada waxay ku taal istiraatiijiyad ahaan si ay u fududeyso safarada sahlan ee adduunka. Tayada nolosha waa wanaagsan tahay, goobaha firaaqada ahna way fududahay in la helo.
Qodobka la qoray,
By: Theresa R. Fianko
(Isgaarsiinta Suuqgeynta, Qoraha, Abuuraha Macmiilka)
Shirkadda Dubai City hadda siinta wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda ka heli kartaa hagitaanno, talooyin iyo shaqooyin dalka Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.
Wareegyada Sri Lanka
Turkiga oo ku biiray Dubai
Wixii faahfaahin ah
Shaqo u raadso sida Thaitand
Waddanka Uzbekistan ayaa soo jiitay
Shaqooyinka Dubai ee ku hadla afka luuqada Polishka
Tilmaamaha Barafka ee Portugal ee Dubai
Shaqooyinka Dubai ee ku hadla afka Giriigga
Filipino ayaa ku tartameysa Dubai
Luqadda Faransiiska ee loogu talagalay dadka ajnabiga
Shaqaalaha ku hadla afka Croatian ee Dubai
Shaqooyinka Dubai ee Ruushka ee Dubai
Ka raadso shaqada Dubai ee Spain
Hindisaha Hindiya ee Dubai
Fadlan dooro foom sax ah
Halkan guji si aad u furto Foom
Meelaha la xidhiidha
12 khaladaadka caanka ah ee rakaabku waa inaysan ka dhicin inta ay joogaan Dubai Metro
Meelaha ugu Wanaagsan ee Booqashada iyo Safarada Safarka ee Dubai ee 2019
DUBAI: Tusaalaha Horumarinta
Fadlan login si aad uga faallooto
faallo cusub oo la socoshoJawaabaha cusub ee falanqeeyaheyga
Ma dareemayo nasiib
Abaal marin maleh
Nasiib maahan maanta
Fursadaada hel ku guuleysto Shaqo Dubai!
Ku dhawaad ​​qof walba wuu codsan karaa Bakhtiyaa nasiibka Dubai! Waxaa jira laba shuruudood oo keliya si loogu muteysto UAE ama Shaqaalaynta Qatar: Adeegso Dubbitaalka Visa Lottery si aad uga ogaato dhawr dhag-jab haddii aad u-qalanto Visa Shaqada. Duulimaad kastoo shisheeye, oo aan ahayn dhalashada UAE, wuxuu u baahan yahay fiiso deganaansho inuu ku noolaado kana shaqeeyo Dubai. Bakhtiyaa-nasiibkayaga, waad ku guuleysan doontaa Degenaanshaha / Fiisada Shaqada ee kuu oggolaaneysa inaad ka shaqeyso Dubai!
Isku day nasiibkaaga
Haddii aad ku guuleysato shaqada Dubai waxaad u baahan tahay inaad diiwaangeliso faahfaahintaada.
Koodhkaadaada ansax u yahay